Wikipedia:Takelaka/11 2020 - Wikipedia
Yoweri Museveni tamin’ny Septambra 2015
I Yoweri Kaguta Museveni dia mpanao pôlitika ogandey, filohan’ny Repoblikan’i Oganda nanomboka tamin’ny taona 1986. Teraka tamin’ny taona 1944 izy.
Teraka tao Ntungamo (ao amin’ny faritra atsimo andrefan’i Oganda) i Yoweri Kaguta Museveni. Zanaky ny mpanan-tany be, ao amin’ny vondrona Banyankôle, izy. Mba ho fanomezam-boninahitra ny antokon-tafika faha-7 ao amin’ny tafiky ny mpanjana-tany britanika atao hoe "Abaseveni" nonomezana azy ny anarana hoe Museveni. Tao amin’io antokon-tafika io izy no nanompo niaraka amin’ny Ogandey anarivony maro nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Nianatra tao amin’ny sekolin’i Ntare izy avy eo nandalina siansa pôlitika sy toekarena tao amin’ny Oneversiten’i Dar es-Salaam any Tanzania tamin’ny taona 1967 hatramin’ny taona 1970. Niditra tao amin’ny fikambanan’ireo saro-piaro amin’ny tanindrazana henjam-pihetsika izy ka lasa filohan’ny Front des étudiants africains révolutionnaires (USARF). Nifanerasera amin’ny mpikambana ao amin’ny Front de libération du Mozambique (Frelimo), izay niady tamin’ny fahefana mpanjana-tany pôrtogey, koa izy ary nianatra ny paika momba ny ady anaty akata tamin’izy ireo.
Tamin’ny taona 1970 dia nody tany Oganda i Yoweri Museveni ka niditra tao amin’ny fitondran’ny filoham-pirenena Milton Obote. Taorian’ny fanonganam-panjakana nataon’i Idi Amin Dada tamin’ny taona 1971 dia nandrositra any Tanzania izy ka nitarika ady anaty akata izay notohanan’ny tafika tanzaniana. Niverina tao Oganda izy tamin’ny taona 1979 raha voaongana ny fitondrana lian-dran’i Idi Amin Dada vokatry ny fidiran’ny tafik’i Tanzania an-tsehatra. Tafatsangana indray ny governemanta sivily. Nankasitrahin’ny vahoaka i Yoweri Museveni sy ny antokony Mouvement patriotique ougandais, nefa i Milton Obote no lany tamin’ny fifidianana nanjakan’ny hosoka sy ny hala-bato tamin’ny taona 1980.
Nisitaka tany amin’ny toeram-ponenany any Andrefana i Yoweri Museveni ka nangana ny National Resistance Army (NRA) tamin’ny taona 1981. Rehefa rava ny fitondran’i Obote ka azon’ny NRA i Kampala dia niakatra teo amin’ny fitondrana i Yoweri Museveni tamin’ny volana Janoary 1986. (tohiny...)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/11_2020&oldid=997449"
Voaova farany tamin'ny 24 Septambra 2020 amin'ny 18:33 ity pejy ity.